Alfa: AS Adema 1 - 1 Uscafoot | Hevitra MPANOHARIANA
Alfa: AS Adema 1 - 1 Uscafoot
2007-04-23 @ 08:33 in Spaoro
Tsy fantatro loatra ny tena fanalavana ny Alfa fa ny fahazoako azy dia hoe Analamanga League Football Association. Resaka baolina fandaka izany no resako eto. Enina hatrany ny isan’ny lalao ao anatin’ny andron-dalao iray eto amin’ny Alfa maro ekipa indrindra. Mikantona moa amin’izao fotoana izao ny kianjaben’ny Mahamasina koa dia eny amin’ny kianjan’Alarobia avokoa no notanterahina ny fihaonana. Lalao telo no notanterahina ny Asabotsy ary Alahady koa telo toy izany. Tamin’ny lalao omaly ary dia resin’ny Japan actuel’s 2 noho 1 indray ny Ajesaia. Tsy mety afa-bela amin’ity ekipa iray ity noho izany ny tompon’ny amboaran’i Madagasikara tamin’ny herintaona (2006). Lalaon’ny tanora vao misandratra raha jerena amin’ny ankapobeny na dia manana ny traikefa kokoa aza ny Japan.
Lalao setrasetra :
Fa ny lalao natrehiko manontolo ihany no tena azoko resahina eto.Lalaon’ny mpirahalahy mifandrafy, lalaon’ireo mifankafantatra tsara nefa tahaka ireny tsy hahay hifandray ireny. Lalaon’ny samy ngeza raha ny tena marina. ny Uscafoot tsy maintsy mandresy raha te-hanana toerana tsara kokoa ahafahany miatrika ny dingana manaraka, ratsiratsy ihany manko ny laharana misy an-dry zareo hatramin’izao fotoana izao. Ny Adema kosa tsy hanaiky lembenana fotsiny amin’izao sady hiaro ny voninahiny hatrany.
Fizaram-potoana voalohany :
Ny Uscafoot manao fanamiana mavo manontolo avy avaratra no manafika mianatsimo. Ny Adema kosa miakanjo fotsy ranoiray avy aty atsimo no mitodika mianavaratra. Ny Uscafoot no nandaka ny baolina voalohany. Nihahenjana avy hatrany ny lalao ary nifamaliana ihany koa ny fanafihana saingy nanana ny tombony kokoa ny Adema. Nisy fanafihana iray an’ny Adema avy amin’ny ilany ankavia. Nanavatsava tao anaty tokonana lehibe ( surface de réparation) ilay mpanafika (angaha moa misy fantatro loatra ry zalahy e ! izaho koa moa variana amin’ny fijerem-baolina nefa manadino ny laharan’ilay mpilalao). Natsipiny ho any amin’ny mpanafika amin’ny ilany ankavanana indray izany. Nijijijijy ihany koa iley io nefa tsy nahita lalana hitifirana koa dia nanolotra izany indray ho any amin’ny ankavia somary afovoany kokoa. Nalalaka dia nalalaka ranamana ka afaka nikendry tsara ny hampidirana ny baolina. Tany amin’ny ankavian’ny mpiandro tokonana no nampidirany ny baolina. Vao minitra fahafito monja tamin’izay fotoana izany. 1 noho 0 ny lalao ary dia nandresy ny Adema hatreo.
Taitra tamin’ny torimasony ny ekipan’ny Kaominina. Niezaka ny nanindry saingy mailaka ihany koa ny fiarovan’Ivato seranana. Mandeha daholo na daka na kapakapa. Miha-tsy maharaka ny mpitsara. Miniotra faharoa, nanao fahadisoana ny Uscafoot saingy tsy hitan’ny mpitsara, tonga dia nikapa tongotra ny naman’ny Adema. Nivandravandra loatra ka hitan’ny mpitsara. Saiky raikitra avy hatrany ny ady amparimbona. Tsy maintsy namoaka karatra mena tsirairay avy ho an’ny mpilalaon’ny andaniny sy ny ankilany ny mpitsara. Samy nilalao folo ny ekipa roa nanomboka teo.
Niezaka ny nitady isa ny Uscafoot saingy voafehin’ny Adema kokoa ny lalao tamin’ity fizaram-potoana voalohany ity. Ny valim-panafihana no tena heriny teto.
Antontanisan’ny fizaram-potoana voalohany :
Ny isan’ny baolina tafiditra dia 1 ho an’ny Adema ary 0 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny tifitra dia 2 ho an’ny Adema ary 4 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny baolina nivoaka fotsiny fa tsy tifitra dia 2 ho an’ny Adema ary 4 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny daka anjoro kosa dia 2 ho an’ny Adema ka 3 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny Position de hors jeu dia 4 ho an’ny Adema ary 1 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny karatra mavo dia 1 ho an’ny Adema ary 1 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny karatra mena dia 1 ho an’ny Adema ary 1 ho an’ny Uscafoot.
Fizaram-potoana faharoa :
Niezaka ny nifehy baolina amin’izay ny Uscafoot. Saiky nidongy tany amin’ny kianjan’ny Adema aza ny baolina nandritra ny dimy miniotra voalohany. Iray monja anefa ny tena mpanafika avy ao amin’ny Kaominina ka sarotra ho azy ireo ny mitady irika. Mahery vaika kosa ny fanafihan’ny Adema hany ka manao fihetsika mahery vaika hatrany ny fiarovana avy ao amin’ny Uscafoot. Izay no nahatonga ny karatra mavo betsaka kokoa ho an’ny Uscafoot tamin’ity fizaram-potoana faharoa ity. Fanafihana tany amin’ny ilany ankavanana, hazakazaka tsy misy tahaka izany no nahatonga ny fingana tanaty tokonana lehibe nahazoan’ny Uscafoot ny penalty. Tezitra ihany ny mpanazatra sy ny mpanohana ny Adema ka manao hoe ampiana fotsiny ny zanaky ny Patirao izany. Tsy manana mpampidi-baolina tokoa aloha ny Uscafoot e ! Io penalty io ihany koa izany no nahazoan’ny Uscafoot ny isa tokany. Miniotra faha-55 indrindra tamin’izay fotoana izay.
Nifamaliana ihany ny fanafihana taorian’izany saingy tsy nahitam-bokany loatra intsony. Ny 15 miniotra farany no tena saiky nahatafidiran’ny andaniny sy ankilany baolina saingy tsy nisy nahay nanararaotra izany ry zareo. Mbola amin’izay aloha ny haavo teknikan’ny mpilalao malagasy hatramin’izao : tsy mahay mitifitra na dia baolina atosi-potsiny hiditra anaty harato aza tsy hay.
Antontanisan’ny fizaram-potoana faharoa :
Ny isan’ny baolina tafiditra dia 0 ho an’ny Adema ary 1 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny tifitra dia 6 ho an’ny Adema ary 6 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny baolina nivoaka fotsiny fa tsy tifitra dia 3 ho an’ny Adema ary 2 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny daka anjoro kosa dia 3 ho an’ny Adema ka 2 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny Position de hors jeu dia 1 ho an’ny Adema ary 0 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny karatra mavo dia 0 ho an’ny Adema ary 3 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny karatra mena dia 0 ho an’ny Adema ary 0 ho an’ny Uscafoot.
Antontanisan’ny lalao manontolo
Ny isan’ny baolina tafiditra dia 1 ho an’ny Adema ary 1 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny tifitra dia 8 ho an’ny Adema ary 10 ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny baolina nivoaka fotsiny fa tsy tifitra dia 5 ho an’ny Adema ary 6 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny daka anjoro kosa dia 5 ho an’ny Adema ka 5 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny tsipy an-tanana dia 15 no nataon’ny Adema nefa 17 kosa ny nataon’ny Uscafoot.
Ny isan’ny Position de hors jeu dia 5 ho an’ny Adema ary 1 kosa ho an’ny Uscafoot.
Ny isan’ny karatra mavo dia 1 ho an’ny Adema ary 4 ho an’ny Uscafoot.
Lalao enina isaky ny andro (journée fa tsy jour) no atao satria mizara poule anankiroa izao ny ALFA, dia misy ekipa fito avy. Tsy hihaona mihitsy izay tsy iray poule.
Ho an'ny poule misy ny AS ADEMA dia tsy tokony hisy atahorana firy aloha hatramin'izao ny USCAFoot satria sendra poule maivana, ka ny Adema irery ihany no tena azo lazaina ho henjana ao. Fa ny poule misy ny Ajesaia sy ny Japan Actuels no tena samy henjana ary hita ho sahirana ihany ireo ekipa hafa ankoatra an'ireo roa ireo raha te-hiditra amin'ny dingana manaraka.
Boribory anefa ny baolina ary tsy misy ekipa azo tsinontsiniavina fa dia ny ampitso no aoka hilaza.
Nampidirin'i DotMG @ 15:12, 2007-04-23 [Valio]